Yakavanzika Policy - Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
Kuvanzika kwako kwakakosha kwatiri. Iyi itsika yeJWT yekuremekedza zvakavanzika zvako zvine chekuita neruzivo rwatinogona kutora kwauri kubva kune yedu webhusaiti, https://www.jwtrubber.com, uye mamwe mawebhusaiti atinawo uye atinoshanda.
Isu tinongokumbira ruzivo rwemunhu kana isu tichinyatsoda kuti tikupe sevhisi kwauri. Isu tinotora iko nenzira dzakaringana uye dzepamutemo, neruzivo rwako uye mvumo. Isu zvakare tinokuzivisa iwe kuti sei tiri kuiunganidza uye kuti ichashandiswa sei.
Isu tinongochengetedza ruzivo rwakaunganidzwa kwenguva yakareba sezvazvinodiwa kuti tikupe iwe nebasa rawakumbira. Ndeapi data atinochengeta, isu tichadzivirira mukati mekutengeserana nzira dzinodzivirira kurasikirwa uye kuba, pamwe nekusabvumidzwa kuwana, kuburitsa, kuteedzera, kushandisa kana kugadzirisa.
Isu hatigovane chero ruzivo rwehukama paruzhinji kana nevechitatu-mapato, kunze kwekunge zvichidikanwa nemutemo.
Yedu webhusaiti inogona kubatanidza kune ekunze saiti ayo asiri kushanda nesu. Ndokumbirawo muzive kuti isu hatina masimba pamusoro pezviri mukati nemaitiro enzvimbo idzi, uye hatigone kugamuchira mutoro kana mutoro pamitemo yavo yekuvanzika.
Iwe wakasununguka kuramba chikumbiro chedu cheruzivo rwako pachako, nekunzwisisa kuti isu tingangotadze kukupa iwe mamwe eako masevhisi aunoda.
Kuenderera mberi kwekushandisa kwedu webhusaiti kunozoonekwa sekugamuchirwa kwemaitiro edu pane zvakavanzika uye neruzivo ruzivo. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve isu mabatiro emushandisi dhata uye zvemunhu ruzivo, inzwa wakasununguka kutibata nesu.
Iyi bumbiro inoshanda sa1 Nyamavhuvhu 2021.
Radiator Rubber Gomo, Radiator Rubber Isolators, Passive Radieta, Passive Bass Radieta, Bass Radiator, Diki Aluminium Led Radieta,